Ukuqinisekisa amanqaku aliqela eRedmi ngeSpapdragon 855 nguLu Weibing | I-Androidsis
Iimpawu ezininzi zeRedmi eneSpapdragon 855 eqinisekiswe nguLu Weibing
Iqinisekisiwe loo nto URedmi, i-Xiaomi sub-brand esebenza ngoku ngokuzimeleyo, isebenza kwi Iflegi yefowuni ene-processor Qualcomm Snapdragon 855.
Zininzi iindawo ezivuzayo kunye ne-buzz malunga noku, kwaye uLu Weibing, umongameli weRedmi, ebesebenza kakhulu kwimidiya yoluntu, evusa uqikelelo malunga nemisebenzi yefowuni kunye neempawu, ezinje ngezo besikuxelele ngazo.
Abaphathi, kwesi sihlandlo, baqinisekisile, ngoWeibo, ukuba ifowuni iya kuza ne-camera ye-ultra-wide sensor. Kwakukhe kwatyhilwa ngaphambili ukuba iyakuba neseti yekhamera ephindwe kathathu ngasemva, ibandakanya i-48 MP + 13 MP + 8 MP sensor, ezinjengezo zikwi Mi 9 SE.
Kukhe kwathiwa Iflegi elandelayo yeRedmi iza nenkxaso yejackphone ye3,5mmkunye neNFC. Kwelinye icala, ulwazi oluvuthiweyo ngaphambili lucebisa ukuba ifowuni izakubonisa iscreen se-6.3-intshi ngesisombululo esigcweleyo se-pixels ezingama-2,340 x 1,080.
Ngaphantsi kwehood, ngokusekwe kukuvuza kwangaphambili, Ixhobisa ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi. Inokufika ne-MP eyi-32 ngaphambili yokuthatha iiselfie nokwenza iifowuni.
Kwisebe lesoftware, sinethemba lokuba i-smartphone iza kuza kuqala ifakwe kunye nefayile ye- inkqubo yokusebenza I-Android 9 Pie ngokusekwe kuhlobo lwamva nje lwe MIUI 10. Kananjalo iza nenkxaso yolunye uhlobo lwentlawulo ekhawulezayo, nangona singazi ukuba ibhetri ingabamba ntoni.
Ngokumalunga negama, linokwaziwa ngokuba yiRedmi X. Nangona kunjalo, umongameli waseRedmi, u-Lu Weibing, kutshanje uqinisekisile ukuba ayizukuba yile naleya ifowuni iya kuba negama elingcono. Oku kuphakamisa ukuba iRedmi X luhlobo oluthile lwegama langaphakathi okanye igama lenye i-smartphone esebenza ne-chipset. Snapdragon 730.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iimpawu ezininzi zeRedmi eneSpapdragon 855 eqinisekiswe nguLu Weibing
I-Xiaomi Redmi Qaphela i-6 Pro yokuhlaziya kwi-Android Pie
Ungazilungisa njani iingxaki ezigqityiweyo kwiTelegram